रामबहादुर स्मृतिमा डिबेट एन्ड क्वीज – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
रामबहादुर स्मृतिमा डिबेट एन्ड क्वीज
- विष्णु विकिरण
ललितपुर लुभुस्थित नमुना स्कुलका संस्थापक रामबहादुर श्रेष्ठको २५औ स्मृति दिवसमा डिवेट एन्ड क्वीज प्रतिस्पर्धा गरिएको छ । प्रिन्सिपल रिता श्रेष्ठका अनुसार स्कुलले मा. वि. स्तरीय डिबेट तथा क्वीज कम्पिडिसन गरेको हो ।
ईसीए इन्चार्ज सुर्जु गुरुङका अनुसार डिबेटिङतर्फ धौलागिरि सदनकी छात्र शिवानी महतो प्रथम भइन् । द्वितीय स्थानमा सरिष्मा श्रेष्ठ कञ्चनजंगा सदन, तृतीयमा आश्मा भट्टराई सगरमाथा सदन अनि सान्त्वना अन्सु राना मगर अन्नपूर्ण सदनले प्राप्त गरे । डिबेटिङमा आलोक महर्जन १,२,३, को समूहबाट छानिए भने ४,५बाट आस्था जर्घामगर ६,७,८बाट सुप्रिया राई अनि ९,१० बाट सुरक्षा गुरुङ छानिएका थिए ।
प्रतिस्पर्धामा बिजेताहरुलाई धनेश्वरी श्रेष्ठले चकलेट बाँडेकी थिइन् । निर्णायक मन्डलमा प्रमिला थापा,उपेन्द्र मन्डल र अशोक कंडेल थिए ।
करीब तिन हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने रामबहादुर श्रेष्ठको नमुना स्कुलमा हाल पाँचसय विद्यार्थी छन् । २५वर्ष अघि उनको मृत्यु भएको र मृत्युपछि स्कुल माइली छोरी रिता श्रेष्ठले चलाउंदै आएकी हुन् । लुभु एरियामा अहिले नामी स्कुलको कोटीमा नमुना पनि पर्छ ।